लण्डनको चर्चित रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’मा नेपाली मोडल अनिता « News24 : Premium News Channel
लण्डनको चर्चित रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’मा नेपाली मोडल अनिता
काठमाडौं । लन्डन निवासी नेपाली मोडल अनिता लिम्बूले बहुचर्चित ‘आई टिभी टू’ च्यानलबाट प्रशारण हुने रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’मा सहभागिता जनाएर धेरैको मन जित्न सफल भएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल इन्टग्राममा उनको कौशल देखेर आयोजक टिमले नै उनलाई रियालिटी शो मा भाग लिन आग्रह गर्दै सम्पर्क गरेको थियो । आयोजकको आग्रहपछि उनी अडिसनमा सहभागी हुँदै कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी हुन् ।
उक्त रियालिटी शो आई टिभी टू च्यानलमार्फत गत हप्ता प्रसारण भएको छ । आई टिभी हबमार्फत उक्त कार्यक्रम जुनसुकै समयमा पनि हेर्न सकिनेछ । नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा जन्म भइ इटहरीमा हुर्केकी उनले सानै उमेरदेखि मोडलिङ र डान्सिङमा दिलचस्पी राख्ने गरेकी थिइन् ।
नेपालमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन सकाएर अध्ययनकै शिलशिलामा यूके गएकी उनले बेलायतमा ब्यूटी थेरापी सम्बन्धी अध्ययन पूरा गरिसकेकी छिन् । बर्हिगमको एक फेशन शोबाट मोडलिङ शुरू गरेकी उनले अक्सफोर्ड फेशन विक र लण्डन फेशन शोमा पनि भाग लिइसकेकी छिन् ।
यस्तै अनिताले लण्डनमा आयोजना हुने प्राय फेसन–शो तथा मिस च्यारिटी लगायतका व्युटी कन्टेस्टहरुमा समेत भाग लिएर विभिन्न टाइटल अवार्ड जितिसकेकी छन् । ५ फिट ७ इञ्च उचाईकी अनिता डान्समा पनि अब्बल रहेकी छन् ।
लण्डनमा हुने विभिन्न च्यारिटी शोहरुमा डान्स गरेर धेरै सहयोग जुटाइसकेकी छन । उनले धेरै नेपाली म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन ।
९५ केजी तौल पुग्दा कस्तो देखिएला नायक अनमोल केसी ?
काठमाडौं । चर्चित नायक अनमोल केसीलाई अब रुपमा देखिन पाइने भएको छ । करिब डेढ
हाँस्य ब्यङ्ग्य कलाकार रमेश केसीको गीत छायांकनको सेटमा निधन
काठमाडौं । हाँस्य ब्यङ्ग्य कलाकार रमेश केसीको निधन गीत छायांकनको सेटमा भएको छ । ६९
बिग बोस ओटीटी : ट्रफी जितेपछि उत्सव मनाउदै दिव्या अग्रवा, कति पाइन् प्राइज मनी ?
काठमाडौं । रियलिटी शो क्वीन दिव्या अग्रवाल ‘बिग बोस ओटीटी’को विजेता बनेकी छन् । शनिबार
ललितपुर महानगर-१६ ले वडाव्यापी गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता गर्दै
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका- १६ ले वडाव्यापी गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता गर्ने भएको छ ।